Tamberina 2020: Ahoana ny nahatonga ny voina nateraky ny COVID-19 ho lasa tantaram-pahombiazan’ny maodely shinoa · Global Voices teny Malagasy
Nanome lalana ireo fitantarana miabo ny feo mitsikera
Voadika ny 05 Janoary 2021 16:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Nederlands, Español, Português, English
Sary fanesoana avy amin'ny Stand News tamin'ny fandalovan'ny praiminisitra lefitra shinoa Sun Chunlan ny distrikan-toeram-ponenana iray tao Wuhan izay nitabatabàn'ny mponina avy eny ambaravarankelin'ny tranony: “Faikany, faikany [hosoka] avokoa izao rehetra izao,” “Fampisehoana fotsiny izao rehetra izao.”
Raha niandoha ny taona 2020 dia nalaza ny fielezan'ny valan'aretina COVID-19 tao Wuhan ary niadian-kevitra be tao amin'ny media sosialy shinoa nandritra ny taona ity aretina vaovao ity. Raha nanjaka nandritra ny roa volana voalohany nisian'ny valan'aretina ny feon'ireo nitsikera sy nitapoka kokoa, dia nanome lalana malalaka momba ny niavian'ny viriosy sy fitantarana tsara momba ny fahombiazan'i Shina tamin'ny fifehezany ny valan'aretina avy eo izany ady hevitra izany.
Rehefa voamarika ny fisian'ny viriosy tsy fantatra tao Wuhan misy itovizana amin'ny SARS tamin'ny 8 desambra 2019, dia nofafan'ny manampahefana shinoa ny fitantarana izany, ary nolazainy fa tsy mifamindra eo amin'ny samy olombelona ny aretina aterak'izy io, ary nopetahany fa vaovao faikany izay filazana mifanohitra amin'izany. Efa nokinasa hotontosaina amin'ny 20 janoary [mg] ny taombaovao manara-bolana, izay ahitana famoriam-pianakaviana lehibe hatrany, raha niteny tao amin'ny China Central Television ny Dr Zhong Nanshan,shinoa iray manana ny lazany eo amin'ny sehatry ny aretin-tratra izay nahatsikaritra ny fisian'ny coronavirus SARS voalohany tamin'ny taona 2003, nanamarina fa tratran'ilay viriosy vaovao ny mpiasan'ny fahasalamana miisa 14 tao Wuhan.
Telo andro taty aoriana, tamin'ny 23 janoary, nambaran'i Beijing ny fanakatonana ny tanànan'i Wuhan. Saingy tara loatra, efa nandao ny tanàna hatramin'ny nanombohan'ny volana janoary ny mponina mihoatra ny dimy tapitrisa tao Wuhan.
Anisan'ny faritra voalohany ivelan'i Shina Tanibe tratran'ity valan'aretina ity i Hong Kong. Niteraka lonilony teo amin'ny vahoaka ny fihenahenan'ny governemanta hibahana ny fidiran'ny mpitsidika avy ao Shina Tanibe ho ao Hong Kong. Na izany aza anefa, ny haizatran'ny tanàna efa niaina ny fielezan'ny SARS tamin'ny taona 2003, niaraka tamin'ny fanarahan'ny vahoaka antsakany sy andavany ny fiatahana eo anivom-piarahamonina sy ny fitokana-monina amin'ny ampahany no nahafahana nifehy ny valan'aretina nandritra ny taona 2020.
Koa satria nakatona tanteraka ny tanànan'i Wuhan ary tsy nitatitra afa-tsy ireo vaovao tsara momba ny ezaka ataon'ny governemanta ifehezana ny fielezan'ny valan'aretina ireo seha-baovao miankina amin'ny fanjakana, dia ny tatitr'olompirenena tahaka ny an'i Chen Qiushi, ny mpanoratra diary toa ilay feminista mpikatroka Guo Jing and Ai Xiaoming no lasa loharanom-baovaon'ny olona hahalalana izay toe-draharaha ao amin'ny firenena.
Henika feo mitsikera ny media sosialy shinoa. Tatitra fanadihadiana maro avy amin'ny vaovaom-pitantanambola Caixin no namoaka fa nofafan'ny manampahefana ny tatitra momba ny fielezan'ny valan'aretina, nosamborina ireo nanapongatra ny vaovao, noraràna farafahakeliny nandritra ny tapabolana ny famoahana ny zenôma COVID-19, ary nosivanina nihoatra ny iray volana ny resaka mifandraika amin'izany anjotra.
Nahadiso lalana ny OMS [mg] izay fanafenana izany, fa nahemotr'ity Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana ny fandrisihana ny firenena maro manerantany handrara ny fivezivezena avy any Shina—izay tokony nahafahana nisoroka [mg] ny fielezan'ny valan'aretina manerantany.
Niteraka hatairana ombam-pikoropahana teo amin'ny famoahan-kevitry ny shinoa [fr] ny vaovao hoe matin'ny COVID-19 ilay dokotera Li Wenliang, izay nosamborin'ny polisin'i Wuhan ary noterena hanasonia filazana fanenenana ho “nanely tsaho” momba ny fifindran'ilay viriosy amin'ny olombelona. Maro ireo nitsikera ny rafitra politika izay namafa ny fahalalahan-gazety sy fitenenana [fr]. Nisy aza ireo namariparitra ny fifohazan'ny vahoaka tamin'ny voina ho “fotoanan'i Chernobyl tao Shina” [fr]
Saingy indray mihelatra ihany izany fitroarana izany. Voafafa tao amin'ny media sosialy [fr] ny hevitra rehetra mihaika ny fahefan'ny Antoko Komonista Shinoa. Vondrona sy kaonty media sosialy maro dia maro no voafafa [fr]. Olom-pirenena mpanoratra isan'andro no nosamborina, anisan'izany ry Chen Qiushi, Fan Bing ary Zhang Zhan. Tratran'ny fanafihana avy amin'ny nasionalista anjotra ireo mpanoratra isan'andro tahaka ilay Shinoa mpanoratra tantara foronina Fang Fang.
Fotoana mifanindry amin'izany, notsindronina ho ao amin'ny media sosialy ny angovo miabo [mg], izay rakotry ny fitantarana tsy fahombiazan'ny firenenkafa hifehy ny valanaretina haingana dia haingana. Vitan'ny masoivohom-baovaom-panjakana Xinhua hatramin'ny fandrisihana izao tontolo izao hisaotra an'i Shina [mg] noho ny zavabitany tamin'ny ady amin'ny coronavirus vaovao. Nalaza tao amin'ny media sosialy shinoa ihany koa ny fandisoam-baovao milaza fa niainga tany amin'ny firenenkafa ankoatra an'i Shina, toy ny hoe Etazonia na Italia, ity aretina ity, indrindra rehefa nanohana izany teorian'ny tetidratsy izany [mg] ny mpitondratenin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny shinoa.
Nanomboka tamin'io fotoana io, nandrakotra na tamin'ny fampitam-baovao mahazatra na tamin'ny media sosialy manerana izao tontolo izao ny tantaram-pahombiazana momba ny tolo-tanana ara-pitsaboana ataon'i Shina amin'ny firenenkafa [mg], ny fitomboana ara-toekarena ary ny fivoaran'ny vaksiny iadiana amin'ny COVID-19. Saingy diso ny sasantsasany amin'ireny tantara ireny, tafiditra amin'izany ny fanolanana ny fanamarihan'ny manampahaizan'ny OMS amin'ny fivoaran'ny vaksiny shinoa.
Tao Hong Kong, nitabataba ireo politisiana pro-Beijing amin'ny hametrahana rafi-dalàna ara-pahasalamana tsy maintsy tanterahana [mg] mitovy amin'ny rafitra ao Shina Tanibe izay mametra ny fahazoana servisim-panjakana araka ny kaody loko telo. Hatramin'ny fotoana nanoratana, rafitra kaodim-pahasalamana ho an'izay manolotena no napetraka [tao Taiwan] ho fandraketana ny fivezivezen'ny tsirairay eny ankalamanjana, saingy tsy nampiasaina hamerana ny fivezivezen'ny tsirairay.
Vao haingana izay ny filoha shinoa Xi Jinping niaro ny handraisana ny rafitra kaodim-pahasalamana shinoa hamerana sy ijerena akaiky ny dia manerantany, ary maro no nanahy fa hanimba ny zon'olombelona [fr] sy ny kolontsaina liberaly sy demaokratika aorian'izany ny fandravonana ny fepetram-panarahamaso valan'aretina.
Tsara ny manamarika fa raha resaka nahomby indrindra tamin'ny fiadiana amin'ilay valan'aretina dia Taiwan no voalohany amin'izany—fanjakana mitokana de-facto amin'i Shina taorian'ny ady an-trano rehefa resin'ny Antoko Komonista Shinoa ny Kuomingtang tamin'ny ady an-trano shinoa (1945-1950). Raha manodidina ny 1-2 tapitrisa eo ho eo ny Taiwaney monina an Shina noho ny fihariana, asa sy fanabeazana, efa nandray fepetra fisorohana ifehezana ny sisintany ny firenena ary nanaitra ny vahoaka mialoha momba ity valan'aretina ity hatramin'ny fanombohan'ny janoary, rehefa nahatsikaritra ireo “tsaho” nivezivezy tao Shina momba ny fianahana tamin'ny desambra. Taorian'ny fielezana kely tamin'ny lohataona, raha tsy nozohiana fahasalamana ary noferan'ny governemanta ny fivezivezen'ny olompirenena, tsy nahitana trangam-pifindran'aretina tao an-toerana tao anatin'ny 250 andro mahery mandra-pahatonga ny nahitana izany tamin'ny 22 desambra.
Hatramin'izao fotoana izao, 749 monja ny tranga voarakitra, ary tranga avy any ivelany tafiditra tao an-toerana aza ny ankamaroan'izany. Nefa mbola tsy manaiky ny hampiaty an'i Taiwan ao anatin'ny ady sy fisorohana manerantany ny valan'aretina aza ny OMS noho ny faneren'i Beijing.
Afa-nifehezana tamim-pahombiazana ny valan'aretina ny maodely Shina teo amin'ny sehatra famaliana ny vonjitaitra ara-pahasalamam-bahoaka, saingy nisy fiantraikany teo amin'ny zon'olombelona ny fanjohiana sy ny fameperana faobe ny fivezivezen'ny olona. Avy amin'izany no mahatonga ny maro hihevitra fa manandanja kokoa teo amin'ny fifehezana ny valan'aretina ny maodely Taiwan.